Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre oo Hambalyo u diray Dhalinyaradda Soomaaliyeed – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa hambayo ku aadan aasaaska ururka SYL usoo diray dhalinyaradda Soomaaliyeed.
Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa dhalinyaradda Maanta ugu baaqay in ay qaataan doorkooda ku aadan horumarinta Dalka iyo Nabadeynta Guud ahaan dalka Soomaaliya.
Raysul Wasaaraha ayaa sheegay in dalka uu iminka taaganyahay xiligii ay dhalinyaradda Gacanta ku dhigi lahaayeen isla markaana ay u hagi lahaayeen dhanka Horumarka iyo xasiloonida.
Mudane Kheyre ayaa sidoo kale dhalinyaradda ugu baaqay in ay xasuusnaadaan Dhalinyaradii u soo halgantay Xuriyadda Dalkeena isla markaan sababta u ahaa in maanta ay Soomaaliya dal Madaxbanaan tahay.
Xukuumadda Somaliland oo Bilaabay Qorshe ay hoos ugu dhigayso Sarif Bararka